Video+sawiro:-Wafti uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada fadaraalka soo gaaray Garowe – Idil News
Video+sawiro:-Wafti uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada fadaraalka soo gaaray Garowe
Wafti balaaran oo uu hogaaminayo Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta sare Dawlada Federaalka ee Somalia Mudane C/raxmaan Daahir Cismaan iyo agaasimaha guud ee isla wasaaradaas Mudane Maxamed C/qaadir Nuur ayaa booqasho rasmi ah ku yimid caasimada Dawlada Puntland, kadib marti qaad ay ka heleen Wasaarada Waxbarashad iyo Tacliinta sare ee Puntland.
Waftiga ayaa kala kulmay soo dhowayn balaaran Wasaarada Waxbarashad iyo Tacliinta sare ee Puntland oo uu hogaaminayo wasiirka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland Prof, Abshir Yuusuf Aw-Ciise, wasiir ku xigeenka wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare Dr, Maxamed Cali Faarax, agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashada Maxamed C/qaadir Cusmaan iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland.
Waftiga ayaa booqday dhamaan xafiisyada waaxyaha kala duwan ee Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland kadibna waftiga ayaa booqasho iyo talaan ugu tagay madaxweye ku xigeenka Dawlada Puntland Eng, Cabdixakiim Cabdullahi Xaaji Cumar Camey.
Ujeedada waftigu u yimid ayaa ah ka qaybgalka shirweyne looga hadlayo arimaha waxbarashada labada wasaaradood tan Federaalka iyo tan Puntland.
Qodobada shirka looga hadlayo ayaa ah.
Sharciga iyo siyaasada waxbarashada.
Xoojinta xiriirka iyo nidaamka wada shaqaynta labada wasaaradood.
Manaahijta iyo imtixaamaadka: labada wasaaradood waxay si qoto dheer uga wada hadlayaan islana meeldhigayaan ahmiyada uu leeyahay manhaj iyo imtixaan mideysan oo dalku yeesho si loo xaqiijiyo helitaanka waxbarashado tayo leh oo ku taagan manhaj midaysan, qiimeyn midaysan iyo shahaado mideysan .
In la mideeyo qaab dhismeedka xarumaha waxbarashada si waafaqsan nidaamka caalamiga ah.
Shirku wuxuu bilaabanayaa maalinka khamiista taariikhduna ku beegantahay 06/7/2017, wuxuuna qaadan karaa ku dhowaad mudo asbuuc ah.
Waa markii sadexaad oo wafti heerkaan ah yimaado Puntland tan iyo 2012 taasna waxay ku tusaysaa sida Puntland fure muhiim ah ugu tahay waxbarashada Somaliya,hoos ka daawo muuqaalka.